Omid Reza Mir Sayafi, Bilaogera Iraniana Maty Tany Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2017 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Deutsch, Português, Español, বাংলা, Italiano, 简体中文, 繁體中文, македонски, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Martsa taona 2009 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Maty tao amin'ny fonjan'i Evin tao Teheran tamin'ny 18 martsa i Omid Reza Mir Sayafi, bilaogera sady mpanao gazety Iraniana 29 taona. Nomelohina higadra roa taona sy tapany izy tamin'ny volana Desambra noho ny fanimbazimbana ireo mpitondra fivavahana sy fanaovana fampielezan-kevitra mamely ny Repoblika Islamikan'i Iran. Mbola niandry fitsarana fanampiny hafa i Mir Sayafi noho ny faniratsirana ny finoana silamo.
Araka ny voalazan'ny tranonkalan'ireo mpikatroka ny zon'olombelona ao Iran, nangirifirin'ny hakiviana lalina tany am-ponja i Omid Reza ary nomena fanafody izay toa betsaka loatra ny nohaniny. Nilaza i Dr. Hesam Firouzi, dokotera gadra sady mpikatroka ny zon'olombelona fa nandrisika ny manampahefanan'ny fonja mba handefa an'i Omid Reza any amin'ny hopitaly ivelan'ny fonja izy saingy tsy nandà ireo dokoteran'ny fonja, ary tsy mba nanao fizahana fototra akory.
Nisy ny fanentanana natomboka tao amin'ny Facebook mba “hitazonana an'i Iran ho tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ilay bilaogera Mirsayafi tany am-ponja”.
Nilaza i Mojtaba Saminejad, bilaogera fa nifandray taminy i Omid Reza roa andro talohan'ny nahafatesany ary nilaza fa mety havela hivoaka ny fonja izy atsy ho atsy fa haiditra hopitaly. Nilaza ity bilaogera ity fa nanantena vaovao tsara kokoa noho izany.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ireo mpikatroka ny zon'olombelona ao Iran andro vitsivitsy talohan'ny nigadrana azy, nilaza i Omid Reza fa bilaogy ara-kolotsaina ny bilaoginy fa tsy natao haniratsira.
Ity misy lahatsary iray nalain'i Omid Reza tany Teheran. Fandevenana an'ilay arkeology Iraniana sady akademika Parviz Varjavand.